Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1112 zom
Zoma 14 Des.
Ministerial Association of the General Conference of Seventh-day Adventists, toko 22 sy 23, ao amin’ny boky Seventh-day Adventists Believe; Miroslav M. Kis, “Christian Lifestyle and Behavior,” tt. 675–723, ao amin’ny Raoul Dederen (ed.) Handbook of Seventh-day Adventist Theology.
«Ny fihetsika maneho fahalalahan-tanana sy hatsaram-panahy dia nokendren’ Andriamanitra mba hitahiry ny fon’ny zanak’ olombelona ho mora fo sady hahay hangoraka, sy hampidirana ao anatin’izany fo izany ny fifanaovan-tsoa sy ny fifankatiavana ho tahaka ilay Tompo lehibe Izay tonga mahaleho noho ny amintsika, mba hahatonga antsika ho manan-karena noho no alahelony. Ny lalàna momba ny fahafolon-karena dia noforonina ao anatin’ny fitsipi-piainana maharitra ary nokendrena mba ho fitahiana ho an’ny olona.
«Ny fomba fanehoana fahalalahan-tanana dia narafitra mba hanoherana ilay ratsy lehibe, dia ny fitsiriritana. Hitan’i Kristy fa eo amin’ny fikatsahana asa, ny fitiavana harena no ho tonga antony lehibe indrindra hanongotra avy amin’ny fo ny fakan’ny tena toe-panahy araka an’Andriamanitra marina. Hitany fa ho tafiditra lalina sy mafy orina ao an-tsain’ny olona ny fitiavam-bola, ka hampitsahatra ny fikorian’ny onjan-kerin’ny fahalalahan-tanana, ary hampikatona ny fahatsapany ny hetahetan’ireo mijaly sy malahelo.» - TFC, b. 3, t. 547.
«Raha manana tanjaka sy fahasalamana ny olona anankiray, izay loharanon-keriny, dia tsy maintsy ampiasainy amin’ny fomba hendry izany. Raha mandany ora maro amin’ny fitsilamodamoana sy ny dia ary ny resaka tsy misy ilana azy izy, dia naman’ny kamo hiasa izy, ary izany indrindra no raràn’ny tenin’Andriamanitra. Ny sasany manana asa atao mba hamelomany ny fianakaviany, avy eo mitahiry izay ananany ao an-tsompitra hanaovana asa soa be fiantrana satria Andriamanitra no efa nampiroborobo izany.
Tsy hihevitra ny tenantsika fotsiny no nametrahana antsika eto amin’ity tontolo ity, fa ilaina isika hanampy amin’ny asa lehibe ho amin’ny famonjena, ary haka tahaka ny fiainan’i Kristy manan-danja, izay feno fandavan-tena sy fanoloran-tena.» - TFC, b. 1, t. 325.
1. Lehibe loatra mihoatra ny iheverana azy ny olana momba ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana, hany ka tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny fisaraham-panambadiana any amin’ny firenena sasany. Ahoana no hampiharantsika ny fampianarana mazava avy amin’ny Baiboly rehefa miresaka momba ity lohahevitra ity? Raha ampiharintsika amin’ny fomba entitra kokoa ireo fampianarana nataon’i Jesôsy, moa ho vitsy kokoa va ny olona mirona amin’ny fisaraham-panambadiana? Ifanakalozy hevitra ny mikasika ity olana saro-bahana ity.
2. Mifantoha bebe kokoa amin’ny resaka manontolo momba ny fahafolon-karena. Milaza ny olona sasany fa azony omena izay olona tiany homena azy ny fahafolon-karenany, raha tokony handalo amin’ny tenan’ny fiangonana voalamina izay maha-mambra azy izany. Inona no zava-doza lehibe ao ambadik’io fihetsika io?
3. Amin’ny maha-fiangonana antsika, dia tsy azontsika hodiana tsy hita ny teny baiko rehetra ao amin’ny Baiboly mikasika ny tokony hiahiantsika ny mahantra sy ny malahelo eo anivontsika. Tsy misy olona milaza ny tenany ho Kristianina kanefa hanao tsinontsinona io baiko io. Amin’izay indrindra, inona avy ny fandrika eo amin’ny antso atao amintsika raha toa ka lasa laharam-pahamehana ny fiahiana ny malahelo, na raha lasa faran-javatra izany ka hifanohitra amin’ny fitaovana ampisaina ho amin’ilay farany lehibe? Mifanakaloza hevitra.